Maxay ahayd fal celintii uu sameeyay Maurizio Sarri kadib guuldaradii Tottenham? waxaa ka jawaabaya David Luiz – Gool FM
(Premier League) 26 Nof 2018. Macalinka kooxda Chelsea ee reer Talyaani Maurizio Sarri ayaa kala kulmay guuldaradiisa ugu horeesay ee horyaalka Premier League kooxda Tottenham Hotspur.
Daafaca kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Blues David Luiz ayaa sheegay in tababare Maurizio Sarri uu aad kaga careysan yahay guuldarada ay la kulantay kooxda Chelsea.
“Wuxuu naga xanaaqay dhowr jeer, waxaan xaqiijin karaa inuu in badan naga xanaaqay kulamadii aan soo guuleesanay marka loo fiiriyo kulankii Tottenham Hotspur”.
“Xaqiiqdii isagu ma faraxsaneen, mana jirto cid ku faraxsaneed natiijada kulankii Tottenham Hotspur, marwalba wuxuu qabanayaa waxa uu inoo qaban karo, waana sameyn karnaa waxa aan u sameyn karno isaga dartiis”.
“Waxaan u maleynayaa in kulankan uu inoo noqon doono xasuusteena horyaalka Premier League, mana ahan arin sahlan, dhamaanteen si fiican uma ciyaarin, waxaan u ciyaarnay si xun, ma aanan heysan xawaare la mid ah kulamadii kale aan soo ciyaarnay”.
“Waxa ugu wanaagsan ayaa ah in kulamada aan ciyaari doono isbuuca soo aadan aan kasoo kabsano xaaladan adag, islamarkaana aan isku dayno sida aan ku heli lahayn dhibcaha qaar”
“Dhawaan waxaan wajihi doonaa kooxda Manchester City, waana koox awood badan, waa kooxda ugu fiican dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, sidaas darteed waa inaan soo yareenaa farqiga inoo dhexeeyo”.
Ferdinand oo ka jawaab celiyay weerarka uu Mourinho ku qaaday ciyaartoyda Man United